Saturday September 15, 2018 - 19:49:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Garab kamida xildhibaannada Baarlamaanka maamulka Galmudug isku magacaabay ayaa ku dhawaaqay in ay shaqada Ka Eryeen Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo sanadadii lasoo dhaafay ku magacaawnaa madaxweynaha 'Galmudug'.
Kadib kulan ay magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud ku yeesheen Xildhibaanno katirsan Maamulka Galmudug balse ladhacsan siyaasadda Xukuumadda Kheyre ayay ku sheegeen in ay casileen Xaaf sida ay hadalka u dhigeen.
Kulankii Cadaado ka dhacay maanta gelinkii dambe waxaa shir guddoominayay Gacali Cali Casir oo khamiistii lasoo dhaafay xildhibaanno ku shiray magaalada Dhuusamareeb ay kalsoonidii kala noqdeen.
Madashii Xaaf lagu eryaye waxaa ku sugnaa Max'med Xaashi Carrabeey oo ah Ninka uu Farmaajo uwakiishay in uu xagal daaciyo siyaasadda Xaaf ee maamul ku sheegga Galmudug.
Maamulkan ayaa ah mid ugu liita maamullada shisheeyuhu dhisay ee kajira Bartamaha dalka Soomaaliya wuxuuna maamulkan ka dhaqaaqi la'yahay faragelin uga imaanaysa hoggaanka Dowladda Federaalka iyo maleeshiyaad hubeysan.
'Galmudug' wuxuu noqday maamulka kaliya ee gilgishay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu dhacay shirkii magaalada Kismaayo ee Golaha iskaashiga Maamul goboleedyadu ku iclaamiyeen in ay xiriirka ujareen dowladda Federaalka Soomaaliya.
Baarlamaanka Oo uyeeray Wasiirrada ugu muhiimsan Xukuumadda Kheyre si wax looga weydiiyo Ammaanka Muqdisho.
Dowladda Federaalka Oo Wadahadal lafurtay Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Axmed Madoobe oo Magaalada Muqdisho marti ugu ah madaxda dowladda Federaalka.
Waddooyinka Muqdisho oo loo xiray Wafdiga Ismaaciil Cumar Geelle.